Myat Shu - 2012 April
You are here : Myat Shu » Archives for April 2012
ဒီကလိုဖီးနစ် နာမည်ကိုတော့ မေ့မပစ်ပါနဲ့
Published By Myat Shu On Saturday, April 28th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
ဒုံးပျံဟာ အိတ်ကပ်ထဲကို အလွယ်တကူပဲ ရောက်လာတယ် ခင်ဗျားဘက်က မခံနိုင်တော့လို့ မရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အခါ အဘိုးကင်အတွက် မြေးလည်းကင်က အဖေကင်လိုပဲ ခင်ဗျားလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကမ္ဘာပတ် လမ်းကြောင်းထဲ တင်လွှတ်ကြည့်ပေါ့ လွှတ်တင်ကြည့်ပေါ့ လွှတ်ကြည့်ပေါ့ ဒါကလည်း မိုးလေ၀သ ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်လား အရိုးမြေကျသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး အရိုးပြာကျသွားတာပါ ဟုတ်တယ်လေ နေက ၀င်သွားတယ် နေက ၀င်သွားတယ်ဗျာ ဒီနေရာကနေ ၀င်သွား ခင်ဗျာ အပူတွေတော့ ကျမသွားဘူး ရေမှန်မှန် မရလည်း ရေတော့ မှန်မှန် သောက်လေ ငှက်ပျောဖူး သုံးပုလင်းဆိုတာ ငှက်ပျော သုံးခိုင်လောက်တော့ ဘယ်မှာလာပြီး ဗိုက်ဝမလဲ ဘယ်မှာလာပြီး ပျော်ဝင်မလဲ ဗိုက်မ၀လဲ ငှက်တွေပျော်တာတော့ အရှက်ပြေ ထိုင်ကြည့်နေမယ့် လူတွေအတွက် အမှန်နဲ့တရားကို ခါချပြလိုက်တာ အခုတော့ ခင်ဗျားရင်ဘတ်ထဲမှာ ရေတွေ တသွင်သွင်စီးနေဖို့ လိုအပ်တယ် ရေပိုက်ဆင်မယ်ပြောပြီး မဲဆွယ်သလို လာမလုပ်နဲ့တော့ ဟုတ်လား ရင်ဘတ်ကို ပုတ်ပြရင်း ရင်ဘတ်ကို ပင့်ပြတယ် ... Continue Reading
ရေးသူ - မောင်ခိုင်မာ လိုချင်သည်ဖြစ်စေ… ငြိုင်ငြင်သည်ဖြစ်စေ…. သည်နေရာ ဇာတိမြေသို့ သူ.. လာမိချေပြီကော တဏှာအညှိ ထူရာတောမှာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ လာမိသူ ချူချာမောပြီပေါ့ သောက အနာတရတွေနဲ့ ဘောဂ ရှာမရသူတွေလည်း ရှိရဲ့ လောကီခရီး အလိမ်လိမ်မှာ ဘောဂီ စည်းစိမ်တွေကို ခံစားပြီး ဘောဂ သမ္ပတ္တိ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံသူတွေလည်း ရှိရဲ့ မရှိမဲ့မဲ့ ရှိမဲ့မဲ့ကြောင့် မရှိ တောင့်တ ရှိကြောင့်ကြကြောင့် မရှိ ဘေးထွက် ရှိ သွေးပျက်ရ မရှိ ညှိုးမှိန် ရှိ စိုးရိမ်ရ အချိန်ကို မေ့ တရွေ့ရွေ့လေ သေနေ့ကို စောင့်စား နေသူများဟာ မဟာလူသားတဲ့ ရှင်မရယ် “လူသားသတ္တ၀ါ” လို့ဆိုတဲ့ သဏ္ဍန် အဖြာဖြာ စရိုက်အသီးသီးကို သံသရာ ၀မ်းကြာတိုက်ကြီးက မွေးဖွား မသိမောဟ တရားက မွေးမြူ အယူဝါဒတွေက ကျွေးမွေး လူကောင်ကြီး တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာ ထို လူသားတွေက တဖန်ပြန်ပြီး ကိလေသာ အခိုးအလျှံတွေကို ဖန်တီး ထို အခိုးအလျှံတွေ ထူပွားလာတော့ လူသားတွေကို တုံ့ပြန်ရန်မူ လူသား ဖန်တီးသူတွေကို ... Continue Reading
ဘ၀ဂ်လုံး ဂျိုးဂျိုးခြိမ့်၊ ဒိုးဒလိမ့် ပြန့်ကျဲအောင်
Published By Myat Shu On Wednesday, April 25th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
(၁) “ဘိုးတော်သိကြား” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ဣန္ဒနတ်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ကသစ်ဘုန်းခေါင်” ဟူ၍လည်းကောင်း အထူးထူးသော အမည်နာမတို့ဖြင့် ခေါ်ဆိုအပ်ပေသော သိကြားမင်း ဦးမာဃသည် မယားကိစ္စ အလွန်စွမ်းသူ ဖြစ်ကြောင်းကို ရှေးရိုးစဉ်လာ ဇာတက ပုံပြင်တို့ဖြင့် ကြီးပြင်းလာသူ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ကောင်းစွာ သိကြကုန်၏။ ဘိုးတော်နတ်သံတွင် “မေရုငယ်မှ ပဟိုရ် မြင်းမိုရ်ထိပ်မှာ ဝေဇယန္တာကား စိတ္တရနှင့် စိတ္တဓမ္မာ ကြင်ယာအများ မိဖုရားအပေါင်း ထောင်သောင်းမက ငါ ဘိုးသိကြားမှ ထက်ဖျားရယ်စံ ဝေယံခ၏” ဟူ၍ အလွန်အကျူး ဖွဲ့ဆိုထားသဖြင့် သိကြားမင်းဟူသည့် နတ်သတ္တ၀ါထူးကြီးသည် ကာမ အမှု၌ အတော်ပင် ရှုပ်ပွေလှသော နတ်ပလီကြီးဟု ဆိုသော် ဆိုရကောင်းသည်။ သို့စေမူ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံသူ အချို့ကမူ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, April 20th 2012. Under ဓာတ်ပုံမှတ်စု, မျက်ရှု
ဒီးဒုတ်၊ လင်းယုန်နှင့် လက်ရုံး
Published By Myat Shu On Tuesday, April 10th 2012. Under ဓာတ်ပုံမှတ်စု, မျက်ရှု
(၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် ဗိုလ်တထောင်နေ့စဉ် သတင်းစာမှ သင်္ကြန်ပုံရိပ်များကို မျက်ရှုမှ ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ... Continue Reading
ဆရာကြီး ချစ်သိန်းဦး (CTO) အတွက်…….
Published By Myat Shu On Friday, April 6th 2012. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ကျွန်မ မြန်မာတိုင်းမ်မှာအလုပ်သင် သတင်းထောက်အဖြစ် စပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ပထဆုံးစသတိထားမိတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူကတော့ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကြီး နှာခေါင်းမှာတန်းလန်းနဲ့ စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ဒူးလေးတနန့်နန့်၊ သီချင်းလေးတညည်းညည်းနဲ့ စာမူတွေကို ဖတ်နေတတ်တဲ့ ဆရာကြီး CTO လို့ခေါ်တဲ့ ဆရာချစ်သိန်းဦးပါ။ နောက် ကျွန်မတို့ သတင်းခန်းထဲ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူက ကျွန်မတို့ နာမည်တွေကို အလွတ်ရပြီးနှင့်ပါပြီ..။ မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်မတို့နာမည်တွေကို သူ့အခန်းအကန့်လေးထဲကနေ အော်အော်ခေါ်ပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာစာအရေးအသားတွေကို ခေါ်ခေါ်ပြင်ပေးပါ တယ်။ ကျွန်မကိုဆို “ဘယ်မတုန်း … စာကြောင်းအဆုံးပုဒ်မက..တစ်ပိုဒ်လုံးကို စာနှစ်ကြောင်းထဲနဲ့ ရေးထားရလား” ဆိုပြီး မြန်မာစာကို စာကြောင်းအရှည်ကြီးတွေ ရေးပြီး လည်နေတတ်တာကိုအမြဲဆူပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သတင်းထောက်ပရော်ဖက်ရှင်မှာ လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဆို ဆရာကြီးဟာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, April 6th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု, အမှတ်တရ
- ပညာရှင်တစ်ယောက် ပိတောက်ပွင့်အောင်တောင် မစောင့် နိုင်ဘဲ နွေတောထဲမှ ရုတ်ခြည်းထွက်ခွာ တမလွန်ရွာသို့ ခရီးနှင်ပြီ။ - ငါ့ပညာတွေကို သေရွာသို့ ယူမသွားပါဘူးကွာ ချစ်စွာသော တပည့်တို့ရေ ငါ့ပညာအမွေတွေကို မင်းတို့တစ်တွေကို ပေးခဲ့မယ် သိမ်းကျုံးယူလှည့်ကြကွယ့် တပည့်တို့ ထူးချွန်ထက်မြက်မှုအပေါ် ဆရာ ပြုံးပျော်ချင်တယ်ကွယ်။ - အို..ချစ်စွာသောဆရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ မြန်မာပြန် သတင်းအတတ်ပညာ အစဉ်အလာ ကြီးမားဝင့်ထည်ခဲ့ လောဘတရားကို ပယ်ခွာ စာပေ၌သာ မွေ့ထုံ ပတ္တလားသံစုံတီးခတ် ပတ်ပျိုးနဲ့ နတ်ချင်းကိုဆို နုပျိုဆဲ ဆရာ့ရုပ်သွင်ဟာ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းရင်ပြင်မှာ မွန်မြတ်ဝင့်ထည်စွာ ထင်ဟပ် အနာဂတ်ကာလများသို့တိုင် ခိုင်မာတည်တံ့နေပါဦးမယ်..ဆရာ။ မောင်သွေးသစ် ၆၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀၊ နေ့လယ် ၁၁း၃၀။ (သတင်းစာဆရာကြီး ဦးချစ်သိန်းဦး(CTO) ဘ၀မှတ်တိုင်များနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဆရာများ၏ သူ့အပေါ်အမြင် http://www.myanmar.mmtimes.com/2010/news/461/news06.html မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ... Continue Reading